Mukhtar Iyo Muna Oo Kamid Ah Kuwa Ugu Cadcad Fankeena Ayaa Soo Saaray Muuqaalka Heestooda Cusub Ee Muuq Libaax
Bogga cusub ee ciyaaraha deeyoo ka gal halkan
Mukhtar Osman iyo Muna Heego oo kamid fanaaniinta dhalinyarada ah kuwooda loogu jecelyahay ayaa mar kale soo saaray muuqaal kale oo cajiib ah iyo heestooda cusub ee Muuq Libaax.
Heestan Muuq Libaax waxaa ereyada u sameeyay saada Ciise iyo Muuse Dhoola Yare, halka uu ka laxameeyay Abdirahman Jabuuti, dhanka musigana dabcan waa Abdi Yare Abiib, waxaana shaqada ugu badan ee quruxda Video-gan ama Clipkan ku fara yareystay Dhega Studio oo sanadkan soo saaray muuqaalo qurux badan oo aad loo jecleystay.
Heestan waxaa lagu sameeyay sida idinkaaga muuqata caasimada Norway ee Oslo.
Hadaba waa tan heestoo Muuq Libaax ee daawasho wacan.
Deeyoo Music 2012
Yaa ku guuleysanaya horyaalka Ingiriiska sanadkan 12/13